Haddii Aad Weeraryahan Tahay, Midkee Ayaad Dooran Lahayd Inaad Ka Hor Tagto Wan-Bissaka Iyo Alexander-Arnold? – Gool24.Net
Haddii Aad Weeraryahan Tahay, Midkee Ayaad Dooran Lahayd Inaad Ka Hor Tagto Wan-Bissaka Iyo Alexander-Arnold?
15/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Doodda cusub ee beryahan ka taagan UK ayaa waxay tahay midka wanaagsan labada difaac midig ee Manchester United iyo Liverpool ee Aaron Wan-Bissaka iyo Trent Alexander-Arnold, waxaana qofkii ugu dambeeyey ee arrintan ka hadlay uu noqday difaaca Crystal Palace ee Patrick van Aanholt oo si cad u sheegay in saaxiibkiisa hore ee Wan-Bissaka uu ka fiican yahay laacibka Liverpool.
Wan-Bissaka oo ay da’diisu tahay 22 jir, xagaagii horena ku biiray Manchester United, waxa uu sameeyey bandhig cajiib ah oo uu ku aamusiiyey cabashadii baasha midig ee United ka jirta, waxaanu kasbaday in lagu tilmaamoi mid ka mid ah laacibiintii ugu fiicnaa xili ciyaareedka ee booskaas.
Laakiin Trent Alexander-Arnold ayaa doorka uu ku leeyahay Liverpool iyo kulan kasta oo ay ciyaarayaan uu yahay mid xattaa mararka qaarkood ka sarreeya weeraryahannada, isaga oo difaacis, gool caawin iyo sidoo kale dhalin.
Koobkii Champions League ee xili ciyaareedkii hore ay Liverpool ku guuleysatay, waxa uu Trent Alexander-Arnold u ahaa udub-dhexaad sameeyey kubbadihii guulaha go’aamiyey kulamo badan.
Sidaas oo ay tahay, Van Aanholt waxa uu rumaysan yahay in Wan-Bissaka oo ay waqti kusoo wada qaateen Crystal Palace uu yahay laacibka fiican labadooda, waxaanu yidhi: “Miyuu ka wanaagsan yahay Alexander-Arnold? Taas shaki kuma jiro.
“Waa laba ciyaartoy oo kala duwan. Difaac ahaan, Aaron lama rumaysan karayo, waanu ka wanaagsan yahay Trent.”
Intaa kaddib waxa uu qiray in weerar-geynta kubadda uu Trent Alexander-Arnold ku fiican yahay, waxaanu yidhi: “Haa, Trent wuxuu leeyahay weerar iyo koorne laagis, lugtiisa midig ah. Laakiin haddii aad weydiiso Wilfred Zaha midka uu ka hortegi lahaa maalin walba, Trent ama Wan-Bissaka, waxa uu odhan lahaa Trent.”
Laacibkani waxa uu ku dooday in Wan-Bissaka uu yahay difaac shaqadii looga baahnaa ee Manchester United si fiican u qabsaday, waxa ugu weyn ee laga rabayna ay ahayd inuu goolkiisa ka ilaaliyo kubbadaha kaga imanaya dhinaciisa.